Hafanàm-po nomerika · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Jolay, 2013
Hahavonjy Ny Aterineto Rosiana Ve Ny Piraty?
Eoropa Afovoany & Atsinanana 31 Jolay 2013
Raha jerena tamin'ireo mpanatrika ny fihetsiketsehana farany teo dia tsy nahovoka ihany ireo mpanohana ny fahalalahan'ny aterineto rosiana namindra ny hetsika avy any amin'ny aterineto ho hitan'ny daholobe.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Jolay 2013
Manivana Ny Marina Amin'ny Foronina Ao Amin'ny Tranonkala Miteny Frantsay
"Minia mamoaka vaovao diso ny olona sasany fantatra amin'ny fikatrohany ara-politika." Ao amin'ity lahatsoratra ity isika no hijery ny tetikasam-panamarinam-baovao amin'ny media miteny frantsay.
Radio Vieques: Hitsaboana Ny Nosy Poerto Rikana Taorian'ny Fizàrana Daroka Baomba
Amerika Latina 27 Jolay 2013
Nijaly nandritra ny 60 taona mahery ny nosy Vieques nohon'ny fampiasana azy ho tobi-tafika an-dranomasina Amerikana sy faritra nanaovana fanazarana fidarohana baomba
Facepopular, Tambajotra Sosialy “Malaza” Vita Arzantina
Namorona ny Facepopular ireo mpikatroka ara-politika Arzantina, tambajotra sosialy sokajiana ho "malaza sy Amerika Latina". Tao anatin'ny volana vitsy nampahafantarana azy, efa nahazo mpiserasera maherin'ny 24.000 sahady ny tambajotra.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jolay 2013